Beeralayda suufka Afrika iyo reer galbeedka - BBC News Somali
Beeralayda suufka Afrika iyo reer galbeedka
Image caption Beeraha suufka
Sanegal ayaa waxay ka mid tahay dalalka Afrika ee suuq geeya suufka. Laakiin beeralay reer Senegal ayaa waxay la kulmayaan tartan culus oo kaga imaanaya beeralayda Maraykanka iyo Yurub oo dowladahooda lacag ay ku kabaan.
Suufka laga soo saaro Sanegal ayaa ah suufyada ugu tayada fiican adduunka, laakiin markii ay beeralayda suuqa geeyaan suufka kuma gadi karaan lacagta ay ku doonayaan suufka Maraykanka iyo Yurub laga keeno awgeed.
Sidoo kale waxaa raqiis noqday dharka dibada laga keeno ee laga sameeyo suufka raqiiska noqday.
Wariyaha BBCda ee Sanegal Thomas Fessy ayaa la kulmay beeralayda suufka iyo ganacsatada dharka.
Dalka Djibouti waxaa uu ka mid yahay meelaha ay sida weyn ugu soo xoogeysanayaan adeegyada xawaaladaha ee dhulka Soomaalida ay ku nooshahay. Shirkadda Xawaaladda Qaran ayaa ka mid ah shirkadaha Djibouti ka hawlgala. Wariyaha BBC Daud Aweis ayaa magaalada Djibouti ka waraystay maamulaha shirkadda Qaran ee Djibouti Mustafa Maxamed Cabdullaahi adeegyada ay Djbouti ka qabtaan.